Umshini Wokuxubha Phansi
Ukugcinwa Kwamatshe Amakhemikhali Amakhemikhali
Abahlanzayo kumele bakuqonde ukuhlanzwa kukakhaphethi wamahhotela nokugcinwa kwawo
Amahhotela nezindawo eziningi zomphakathi njengamakamelo nemigwaqo embozwe okhaphethi. Kunezinhlobo ezintathu eziphambili zekhaphethi ezisetshenziswa kakhulu, okungukuthi, amakhemikhali e-fiber fiber, okhaphethi boboya kanye namakhaphethi ahlanganisiwe.
Ngabe amahhotela asezingeni eliphakeme awahlanza kanjani okhaphethi? Kukufundise izinyathelo namakhono wokuhlanza ukhaphethi ochwepheshe
Kulezi zinsuku, ngokuthuthuka okusheshayo kwezikhathi, okhaphethi manje sebesetshenziswa cishe kuyo yonke imizi. Okhaphethi abakwazi ukunciphisa kuphela uthuli olulethwe egumbini ngezicathulo. Ukuhlanzwa kukakhaphethi akunakushaywa indiva. Ngokuvamile, amahhotela aphezulu noma izindlu zezivakashi zinaka kakhulu ukuhlanza i-fab ...
Isimiso esisebenzayo somshini wokuhlanza ihhotela Yiziphi izinzuzo nezici zokuhlanzwa kwehhotela
Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe kanye nezinga eliphakeme neliphakeme lokuphila labantu, yonke imikhakha yempilo ayisathembeli emisebenzini yabantu ukugcina ingaphakathi licocekile futhi lihlanzekile. Ukubonakala kokuhlanza i-vacuum kuhlinzeka ngokusebenziseka okuhlukile kwezindaba zokugcinwa kwezindlu. Amahhotela nawo Ukuzinikela ...
Izinto eziyisisekelo zezidingo zemishini yokuhlanza amahhotela
Ukubaluleka kokukhethwa kwemishini yokuhlanza: Okokuqala, ngoba imishini eminingi yokuhlanza inokutshalwa kwezimali okukhulu kakhulu nokuphila isikhathi eside; okwesibili, ukukhethwa kwemishini yokuhlanza kufanelekile ngemiphumela yokuhlanza kanye namandla okulungisa. Ukuthatha amahhotela njengesibonelo, ihhotela ngalinye kufanele ...
Yimiphi imishini yokuhlanza edingeka ehhotela? Ungakhetha kanjani?
Kumahhotela, ukuphathwa kwemishini yokuhlanza yingxenye ebalulekile yokuphathwa kwegumbi lezivakashi. Akuhlobene nje kuphela nezinzuzo zezomnotho zamagumbi ezivakashi, kodwa futhi nesimo esiyisisekelo sokuqinisekisa ukuqhubeka kahle komsebenzi wokugcinwa kwezindlu. Hlobo luni lwemishini yokuhlanza ekhona ehhotela ...
Ukuhlaziywa kwe-SWOT kwabadlali abakhulu emakethe yezimboni yokuhlanza i-vacuum njengeDelfinvacuums, i-RUWAC INDUSTRIESAUGER GMBH, izixazululo ze-RGS, njll.
Ngokusebenzisa imibiko yocwaningo lwezimakethe yokuhlanza imakethe yezimboni, izinhlangano zingathola ulwazi olubalulekile mayelana nabancintisana nabo, izinguquko kwezomnotho, inani labantu, izitayela zamanje zezimakethe, kanye nezimpawu zokusebenzisa amakhasimende. Lo mbiko wokumaketha womhlaba uphakamisa izixazululo zangempela zomhlaba zocwaningo ngalunye ...
Lo ngumuntu ophumelele umklomelo wethu we-2021 "Ikhaya elihlanzekile"
Abahleli bethu bahlole amakhulukhulu ama-sprays amasha, ama-wipe, ama-cleaner namathuluzi. Imikhiqizo yethu okumele sibe nayo: imikhiqizo okulula ukuyisebenzisa futhi enamandla. Amaphuzu ebhonasi okuphepha nobungani beplanethi. Umagazini wango-1964 we “Better Homes & Gardens” wafundeka kanje: “Akulona lonke ucwaningo olune ...
Isiphepho esinamandla kakhulu eMongolia sidale ukufa kwabantu abayisithupha kwathi abayi-80 banyamalala
Izindaba zeDarima Basil / CCTV Ekuseni ngoMashi 15, isikhathi sendawo, uMbuso Jikelele Wokuphathwa Kwezimo Eziphuthumayo eMongolia umemezele ukuthi kusukela kusihlwa ngomhla ka-13 kuya ku-9 ekuseni ngomhlaka 15, kubikwa ukuthi abelusi abangama-548 abavela ezifundazweni eziyi-9 balahlekile isiphepho sesihlabathi ngaphesheya kwesifunda ...
Amabhuleki ahlulekile futhi! UTesla ushayisa i-guardrail, ngemuva kokuhlolwa kokuthengisa futhi! Okwakamuva: Umhlabathi uyashelela!
Kule mpelasonto, amabhuleki kaTesla ahlulekile futhi futhi kuyahlekisa. Indaba injengalesi: umnikazi weTesla, ehluleka ukunyathela ibhuleki, wangena ekhanda lemoto kuqala, wabe esecela usizo lwenkonzo yokuthengisa ngemuva kukaTesla. Kodwa-ke, abasebenzi bakaTesla abamkholwanga futhi bazama uku ...
Kuqubuke umlilo ebhilidini lomlando eShijiazhuang
Lo mlilo uqubuke ngabo-11: 20 namhlanje ekuseni ezintweni zokwambathisa udonga olungaphandle lweZhongxin Building, elisekhoneni eliseningizimu-mpumalanga empambanweni yomgwaqo uJianshe Dajie noFanxi Road eShijiazhuang City, esifundazweni sase-Hebei. Umlilo, ukuphepha komphakathi, ukuphathwa kwamadolobha kanye neminye iminyango ...
Amanani entengo eluhlaza ayakhuphuka eChina
Ubhadane luye lwaholela ekukhiqizweni okubuthaka komhlaba wonke nasekuhlinzekweni okuqinile kwezinto zokusetshenziswa. Izinga elengezwe ngenani le-ferrous, non-ferrous, laseChina, elinezimayini zamalahle nokuwasha lisephansi kunenani eliphelele lezimboni elengeziwe. Inkomba yokukhiqizwa kwezimboni yamabanga aphansi kanye ne-proces ...
Izinto ezi-5 okufanele uzibheke lapho ukhetha okokuhlanza ukhaphethi
Esikhathini esedlule, okhaphethi be-shampoo bebengathandwa yinoma ngubani. Kodwa-ke, noma ngubani ophethe ukhaphethi noma ukhaphethi olingana negumbi uzovuma ukuthi le ndaba engathandeki futhi kwesinye isikhathi engenakuzisiza kumele abhekane nayo kuze kube yilapho sekwephuze kakhulu. Kuhambisana neqiniso lokuthi imishini yebanga lokuhweba ...
Isimo samanje nokubukeka kwemakethe yemabula yaphansi yemabula ngo-2020 - iHusqvarna, i-Indutrade (i-Scanmaskin), i-HTC Group, i-Xingyi Polishing, i-Xtreme Polishing System
IMarketsandResearch.biz ikhiphe umbiko wakamuva wocwaningo emakethe yemabula yaphansi yemabula ngowezi-2020, okubandakanya abakhiqizi, izifunda, izinhlobo nokusetshenziswa kwayo, kanye nezibikezelo zango-2025. Lokhu kuzoba wukuhlolwa kwemakethe yomhlaba kanye nokuhlolwa okuphelele nokuhlaziywa okunamandla. U ...
I-Global Marble Floor Grinding Machine Market 2020 Isimo ne-Outlook - iHusqvarna, i-Indutrade (i-Scanmaskin), i-HTC Group, i-Xingyi Polishing, i-Xtreme Polishing Systems
IMarketsandResearch.biz iveze ucwaningo olusha ku-Global Marble Floor Grinding Machine Market 2020 ngabakhiqizi, Izifunda, Uhlobo kanye Nesicelo, Isibikezelo esiya ku-2025 esenzelwe ukusebenza njengombhalo osizayo wokuhlola imakethe yomhlaba wonke kanye nokuhlola okuphelele futhi. ..
NgoJanuwari 2021, i-COVID-19 yasabalala eShijiazhuang City, esifundazweni saseHebei, eChina. Abantu abaningi bangenwa yileli gciwane. Kusukela ngoJanuwari 6, iShijiazhuang ivalwe ngokuphelele ukuvimbela ubhadane lwasekhaya. Zonke izakhamizi zivivinywa i-nucleic acid njalo ezinsukwini ezintathu, nabantu abavela kwezinye izifundazwe ...
Izimboni ezisetshenziswayo zokugcina ukuphela zizobangela ukuthi imakethe yemabula yaphansi yemabula inyuke maduze
Inkampani ekhula ngesivinini esikhulu yezemakethe i-UpMarketResearch ikhiphe umbiko ngemakethe yemabula yaphansi yemabula. Umbiko wemakethe unikeza ububanzi bemakethe jikelele, kufaka phakathi ukunikezwa kwesikhathi esizayo kanye nokufunwa, ukuguquguquka kwezimakethe, amathuba okukhula okuphezulu, nokuhlaziywa okujulile kwemakethe ezayo ...
Njengoba inani labantu ababulawa yi-US lisondela ku-500K, uDkt.Anthony Fauci uthi abaseMelika bangagqoka izifihla-buso ngo-2022: Ukuvuselelwa kwakamuva kwe-COVID-19
Abantu baseMelika abangaphezu kuka-90,000 kungenzeka bafe ngezimbangela ezihlobene ne-COVID-19 ngoJuni 1, kusho isikhungo esihamba phambili sokubikezela. Le projekthi iza njengoba i-US ilindele ukudlula ukufa kwabantu abangama-500,000 ezinsukwini ezimbili ezizayo. Ukuthi ubhubhane luzophela nini kuhlala kuyimfihlakalo. UDkt Anthony Fauci uthi & ...
Izinto ezi-5 okufanele uzibheke lapho ukhetha okokuhlanza ukhaphethi Esikhathini esedlule, okhaphethi be-shampoo babengeyona intandokazi yomuntu. Kodwa-ke, noma ngubani ophethe ukhaphethi noma ukhaphethi olingana negumbi uzovuma ukuthi lolu daba olungathandeki futhi kwesinye isikhathi olungenakuzisiza kufanele lwenziwe ...
Ungayigcina kanjani phansi i-gangstone floor yezitolo?
I-granite yokufakelwa iyinhlobo yemvuthuluka yemabula yemvelo nempuphu yamatshe njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko. Ingabuye ihlotshiswe ngamatshe, ama-shells, ingilazi nezinye izinto. Isebenzisa i-resin ephilayo njenge-ejenti yokumisa, ukuvusa i-vacuum, ukuqhaqhazela okuphezulu, bese kuphulukisa ekamelweni lokushisa. Sy ...
Izindaba zokuphepha zokwakha ukunakekelwa kwamatshe!
Izingozi zokwakha zenzeke kaningi eminyakeni yamuva nje, okudala ukulimala okukhulu kubasebenzi bokwakha. Ayikho imboni eyehlukile. Ulwazi oluyisisekelo lokwakha ukuphepha luyadingeka ukuqinisekisa ukusebenza okuphephile. 1.Ukusetshenziswa okuphephile kukagesi 1. Njalo uma ufaka indawo yokwakha ukuze ulungiselele ...
Care Ukunakekelwa Kwamatshe skills Amakhono okusebenza kanye nokuqapha ukwelashwa kwe-crystal surface!
1: Uthuli, isihlabathi, namabala ebusweni bamatshe kufanele kuhlanzwe ngaphambi kokwakhiwa. 2: Sebenzisa iphepha lokumboza, ifilimu lepulasitiki nezinye izinto ukufaka amahange wensimbi, ifenisha nokunye ukuhlobisa nempahla. 3: Njengamanje, imishini yobuso be-crystal esetshenziselwa ukunakekelwa kwamatshe ikakhulukazi i-cen ...
Izimbangela, ukuvimbela nokwelashwa kwezindawo zamatshe zamatshe
"Indawo yamanzi" ibizwa ngokuthi "umdlavuza" embonini yokunakekelwa kwamatshe. Isizathu ukuthi lapho itshe selinendawo yamanzi, kuba nzima ukulapha. Ezimweni ezinzima, ingagwetshelwa ngisho nokufa. Izindawo zamanzi zivela ikakhulu ku-granite (eyaziwa ngokuthi i- “granite”). Ngenxa ye...
Ukwenza ngcono izinga lokunakekelwa kwamatshe, abanikazi, izinkampani zokuphathwa kwempahla kanye nezinkampani zokuhlanza kumele zihambe ngazo zombili izindlela!
Njengamanje, ukuhlobisa ngamatshe kuya ngokuya kusetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene zezentengiselwano nezomphakathi njengamahhotela, izakhiwo zamahhovisi, izinxanxathela zezitolo, izikhumulo zezindiza, neziteshi zesitimela ezinejubane, ikakhulukazi ukuhlobisa okuphezulu. Imabula yemvelo cishe yinto yokuqala. Njengoba itshe lemvelo liphezulu ...
Izinto ezidinga ukunakekelwa ekuhlanzweni kukakhaphethi wasebusika
Ubusika buyeza kungekudala, okusho ukuthi iningi lethu lizohlala lifudumele ezindlini. Ukuze wenze ikhaya lakho lizizwe lihlanzekile futhi likhululekile, sekuyisikhathi sokugqoka amagilavu ​​futhi uqedele imisebenzi ethile. Ukusuka othulini kukhaphethi kuya kumakhethini wokuhlanza ajulile, inqubo enhle yokuhlanza ubusika izokusiza ...
Ungalwakha kanjani uhlelo lokulondoloza ukuze ugcine phansi phansi kwamatshe akho elungile futhi kubukeke njengokusha.
Isitezi samatshe siqinile futhi siqinile, singeza into eyingqayizivele yokuklama esikhaleni sokuhweba. Ukuze uzigcine zisesimweni esihle futhi zibukeke zintsha, kubalulekile ukusebenzisa uhlelo olusebenzayo lokulungisa. Ukusuka ekuqondeni itshe ekutholeni amasu wokupholisa aseseleminyaka eminingi, ...
Ubhadane lwe-COVID-19 lulethe ukuqwashisa okudingeka ngokuphuthumayo embonini yokuhlanza kanye nomphakathi ngokubaluleka nokubaluleka kokuvimbela ukusabalala kwamagciwane amancane athelelanayo.
Ubhadane lwe-COVID-19 lulethe ukuqwashisa okudingeka ngokuphuthumayo embonini yokuhlanza kanye nomphakathi ngokubaluleka nokubaluleka kokuvimbela ukusabalala kwamagciwane amancane athelelanayo. UGriffin uthe: “Esikhathini esedlule, sithanda ukusho ukuthi ukuhlanza kungenxa yezempilo, kodwa asisoze sakufakazela lokho ....
Amahhotela akhona yonke indawo kulezi zinsuku. Ngokuvamile, kunamakamelo amaningi ehhotela, aqala ngamakamelo amaningi kuya emakhulwini amakamelo. Manje kuhlanzwa kanjani amakamelo amaningi kangaka nsuku zonke? Uma uthembele kuphela emandleni ...
Uhlobo oluqondile: ikakhulukazi oluyindilinga noma oluyisikwele, luhlukaniswe lwaba izingxenye ezingaphezulu nezingezansi, ingxenye ephezulu ifakwe imoto, okuyingxenye yamandla, kanti ingxenye engezansi yibhokisi lothuli. Njengoba kuzohlala kunezivakashi ezihlala ehhotela, umsindo wokuhlanza umshini akufanele ube phezulu kakhulu, okuyinto ...
Izwe laseMelika libike amacala angaphezu kwezigidi eziyi-12 e-COVID-19
Izwe laseMelika libike ngecala lalo eliyizigidi eziyi-12 le-COVID-19 ngoMgqibelo, ngemuva kwezinsuku ezimbalwa leli lizwe lidlule ukufa kwabantu abayi-250,000 bebulawa yi-coronavirus. Khonamanjalo, izinhlelo zifuna ukuthi abantu baseMelika abayizigidi ezingama-20 bagonywe ngoDisemba nezinye izigidi ezingama-30 inyanga ngayinye ngokufana kokujwayelekile kubuyele esigabeni ...
Abahlanza amahhotela nemiyalo yokuthenga imishini yokuhlanza
Abahlanza amahhotela nemishini yokuhlanza banotshalo-mali olukhulu uma kuqhathaniswa nomjikelezo wesevisi omude. Ukukhethwa okufanele kwama-ejenti wokuhlanza nemishini yokuhlanza kuhlobene nenhlanzeko nokunakekelwa kwehhotela. Ngakho-ke, lapho uthenga izinto zokuhlanza amahhotela nemishini yokuhlanza, ...
Ukuvuselelwa kweCoronavirus: UDkt. Anthony Fauci uthi intwasahlobo ingaletha ukubuyela kokujwayelekile; IMichigan imisa amakilasi, idla amasonto ama-3; Ukufa kwe-246K US
Izwe laseMelika "lingaqala ukubuyisela izinto esimweni esijwayelekile" ngokushesha nje entwasahlobo uma ukuhlolwa kusenesikhathi emithini yokugoma kuqhubeka futhi abantu bevuma ukugonywa, kusho uchwepheshe omkhulu wezifo ezithathelwanayo kuleli lizwe ngeSonto. "Uma sithola iningi labantu abathatha ...
Amachweba aseChina, e-United States nase-Australia aminyene kakhulu futhi kushoda iziqukathi
Mayelana nezimakethe zamanje zase-Asia nezaseChina, iQingdao, Lianyungang, Ningbo neShanghai bonke babike imishini enganele, okuqhubeka ukubambezeleka kokusebenza kwemikhumbi, kanye nokucindezela okuqhubekayo emachwebeni. Amachweba ase-Australia ahlushwa ukusilela emuva okukhulu kokungenalutho ...